स्टक बजारमा विभिन्न उतारचढाव भइरहन्छन् र स्टक मूल्यहरूलाई असर गर्ने कारकहरू यस प्रकारका छन् |
१. कम्पनी-विशेष कारकहरू:
बजारमा प्रभुत्व जमाउने कम्पनीहरूको शेयर मूल्य सामान्यतया उच्च हुन्छ। यी कम्पनीहरूले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि किनारा राख्छन् र उनीहरूबाट थोरै खतराहरू सामना गर्छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको शेयर मूल्यलाई सकारात्मक असर गर्छ।
कम्पनीहरूसँग लचिलो व्यापार मोडेल हुनुपर्दछ जुन परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरू लामो समयसम्म फस्टाउन सक्छन्। तिनीहरू सधैं सान्दर्भिक रहन्छन्, र तिनीहरूको सेयर मूल्यहरू समयसँगै माथि जान्छन्। अर्कोतर्फ, आफूलाई परिवर्तन गर्न असफल हुने कम्पनीहरू पछि पर्छन्।
व्यवस्थापनले कम्पनीको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एउटा बलियो नेतृत्वले कम्पनीलाई सफलतातर्फ लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै, व्यवस्थापनको टिप्पणीले स्टक मूल्यहरूमा तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ। यदि सकारात्मक छ भने, यसले शेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र यसको विपरीत पनि हुन सक्दछ।
२. उद्योग-विशेष कारकहरू
चलिरहेको राजनीतिक परिदृश्यले स्टक मूल्यलाई महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ। राजनीतिक अस्थिरता भयो भने अर्थतन्त्र स्थिर हुँदैन । यसले शेयर मूल्यमा नकारात्मक असर पार्छ । घरेलु मात्र होइन, भूराजनीतिक घटनाहरूले पनि स्टक मूल्यलाई असर गर्छ। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा, अन्यत्र राजनीतिक उथलपुथलले पनि स्टकको मूल्य निर्धारण गर्छ।
सरकार र नियामक निकायहरूको अनुकूल नीतिहरूले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि, विद्युतीय सवारी उत्पादकहरूको स्टक उनीहरूतर्फ सरकारको धक्काका कारण बढ्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ, यदि नीति घोषणाले उद्योगका खेलाडीहरूलाई उत्तेजित गर्दैन भने यसले सेयर मूल्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
ग्राहकको बार्गेनिङ पावर;
ग्राहकहरूको बार्गेनिङ पावर कम हुँदा क्षेत्रको आकर्षण बढी हुन्छ। ग्राहकहरूको उच्च संख्याले बार्गेनिङ पावरलाई कम गर्छ र यसको विपरीत।
नयाँ प्रवेश गर्ने धम्की;
यदि नयाँ प्रवेश गर्नेहरूको खतरा कम छ भने अवस्थित खेलाडीहरूको मूल्य निर्धारण शक्ति बढी हुन्छ र यसले सेयरको मूल्य बढाउँछ। अर्कोतर्फ, यदि त्यहाँ पर्याप्त खतरा छ भने मूल्य निर्धारण शक्ति घट्छ र यसले शेयर मूल्यहरूलाई असर गर्छ।
यी बाहेक प्राकृतिक प्रकोप, लाभांश घोषणा, शेयर बाँडफाँट जस्ता कारकहरूले पनि सेयर मूल्य निर्धारणमा अभिन्न भूमिका खेल्छन्।